ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်, အောင်မြင်မှုနှင့် Burgas ၏မြို့အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်များ - အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
Dimitar Nikolov, Burgas, ဘူလ်ဂေးရီးယား၏အဓိကနှင့်အတူအင်တာဗျူး
"Burgas အမြဲလွတ်လပ်ခွင့်ကိုတစ်ဦးချစ်စရာကောင်းခံစားချက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သဲလွန်စတွေကိုရှင်းလင်းစွန့်ခွာသူအရဲရင့်အိပ်မက်ကိုမြင်၏တစ်ဦးကမြို့။ ယင်း၏တာဝန်ခံပျက်ဆီးမတစ်ဦးကမြို့။ ရွေ့လျားမှုချစ်သောသူရာတစ်ဦးကမြို့, ပင်လယ်ကမ်းခြင်းအားဖြင့်ပင်လယ်မုန်တိုင်းများနှင့်ပူအမှတ်တရများနှင့်အတူတပ်မက်အသက်ရှင်တော်မူသည် ... ။ "
ဤစကားများအားဖြင့် Dimitar Nikolov Burgas မြူနီစီပယ်၏တရားဝင်က်ဘ်ဆိုက်မှာအားလုံးကသူ့ဧည့်သည်များကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏။ သူသညျမိမိမဆုပ်မနစ်အလုပ်အသစ်စီမံကိန်းများအတွက်ချပစ်မဲ 2015% နှင့်အတူ Burgas ၏မြို့တော်ဝန်များအတွက်တတိယအကြိမ်ပြန်လည်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့သည်ဒေသခံရွေးကောက်ပွဲတွေအပေါ် 85 ခုနှစ်, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသစ်များဆွဲဆောင်ဖို့ရည်မှန်းချက်အဘို့ကြိုးစားကြသည်။
ကျနော်တို့ Burgas မြူနီစီပယ်ဖို့မစ္စတာ Dimitar Nikolov နှင့်အတူယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ, အောင်မြင်မှုများ, အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်များနှင့်စိန်ခေါ်မှုများအကြောင်းဆွေးနွေးနေကြသည်။
မင်္ဂလာပါမစ္စတာ Nikolov! သငျသညျ 2007 ကတည်းက Burgas တစ်မြို့တော်ဝန်၏အနေအထားယူပြီးပါပြီ။ ကိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း Burgas ၏မြို့ဘာနဲ့ကျွန်မရုံးကိုယူတဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးဦးစားပေးအဘယ်အရာကိုရှိသနည်း
အဆိုပါမြို့, အဆင်းလှသောမြို့ယခု မှစ. အတော်လေးကွဲပြားခြားနားခဲ့ပေမယ့်အနည်းငယ် "ကျန်ရစ်နာရီ" နဲ့။ ကြှနျတေျာ့သူချင်းနိုင်ငံသားတွေမြို့တော်ကိုပိုပြီးအင်တိုက်အားတိုက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်နှင့်အခြားသူများကိုမြို့ကြီးများနှင့်အတူတက်စောင့်ရှောက်ချင်တယ်။ ထိုအခါငါနှင့်ငါ့အဖွဲ့သည်ယနေ့မိမိတို့၏အလိုတော်ကြောင်းဖြည့်ဆည်းဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်များတွင်တစ်ဖွဲ့လုံးကအခြေခံအဆောက်အဦများအတွက်ယနေ့ထက်အများကြီးပိုဆိုးခွအေနအေခဲ့ - ခြင်းမရှိသောနေရာများမူလတန်းကျောင်းရှိခဲ့ကြသည်, အလုံအလောက်အားကစားဒေသများ, ကားပါကင်နေရာများ, ပင်လယ် Burgas ၏ဖွင့်ပွဲများအတွက်အလားအလာနှင့်မြို့ပတ်လည်ရှိရေကန်များမရှိ မြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတန်ဖိုးအနေဖြင့်ကုန်ခဲ့အမြတ်ထုတ်မခံခဲ့ရ။ ပွဿနာမြားစှာနှင့်၎င်းတို့အားလုံးကိုယခုခြင်းဖြင့်ဖြေရှင်းခဲ့ကြရှိခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည်အမြန်နှုန်းနှင့်တကွ, အလားအလာကောင်းပါတယ်။
ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးလုပ်ပိုင်ခွင့်ရဲ့အစမှာ, ဘူလ်ဂေးရီးယားရုံဥရောပသမဂ္ဂ၏အမှန်တကယ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့ကြောင်းနှင့်ငါ့ဦးစားပေးရည်မှန်းချက်ကိုထိရောက်စွာရန်ပုံငွေများအတွက်လျှောက်ထားရန်စီမံကိန်းများကိုပြင်ဆင်မည်လိမ့်မည်ဟုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးတာဝန်လူမျိုး၏ပြဿနာများဆီသို့ဦးတည်ခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းပူးပေါင်းနှင့်ပြောင်းလဲနေသောမှာပွင့်လင်းသောအမြူနီစီပယ်အုပ်ချုပ်ရေးစုစည်းဖို့ဖြစ်တယ်။ ငါဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲ, Burgas ၏နိုင်ငံသားများထည့်သွင်းစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။
Burgas ၏အပြုသဘောအလားအလာမြင်နိုင်နှင့်ငြင်း, အီးယူရံပုံငွေများစုပ်ယူမှုအတွက်ရလဒ်ကောင်း, မြှို့နယ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပေးဖြစ်ပါတယ်။ အဘယျသို့အဖွဲ့နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဘယ်အရာကိုအရည်အသွေးတွေထိုကဲ့သို့သောအောင်မြင်မှုအောင်မြင်ရန်လိုအပ်လဲ?
ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့မိမိတို့အလားအလာယုံကြည်နှင့်သူတို့၏မြို့ချစ်သောသူလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ကျွမ်းကျင်လူတွေကိုလိုအပ်နေပါသည်။ သင်၏အပေါင်းအဘော်ကိုနိုင်ငံသားများအောင်မြင်ရလဒ်ခံစားနေကြပုံကိုကြည့်ဖို့ထက်ပိုပြီးကျေနပ်စရာဘာမျှရှိပါသည်။ အဆိုပါလစာကအရေးကြီးတယ်, ဒါပေမယ့်သင်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုအတွက်အဓိပ္ပာယ်ကြည့်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်။ အတွေ့အကြုံရှိဝန်ထမ်းတန်ဖိုးရှိသောဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ငယ်ရွယ်န်ထမ်းတစ်ဦးအမြင့်ဆုံးရာခိုင်နှုန်းရှိသည်ဖို့အမြဲ သာ. ကောင်း၏။ Burgas မြူနီစီပယ်ငါတို့သည်အစဉ်မပြတ်ငယ်ရွယ်ပြီးတျသှငျးခံကလူစုဆောင်းဖို့နည်းလမ်းတွေရှာကြ၏။ သူတို့ကသူတို့ကိုလှည့်ပတ်ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်အကြီးမြတ်ဆုံးအလိုဆန္ဒအားအပိုင်။
Sarafovo အတွက်© dnikolov.eu / Burgas ဆိပ်ကမ်းနှင့်ငါးဖမ်းဆိပ်ကမ်းကို
Burgas အတွက်©ယော်ဒန်မြစ် Dimov ဓါတ်ပုံပညာ / BurgasCity.com / စကိတ်ပန်းခြံ
သင့်ရဲ့ website မှာ www.dnikolov.eu နိုင်ငံသားများသင်တို့အပေါ်မှာအလုပ်လုပ်နေကြအားလုံးအတိတ်နှင့်အနာဂတ်စီမံကိန်းများနှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းရနိုငျသညျ။ ဘယ်ဟာသင်ရင်ဆိုင်ရသောအကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အဘယျသို့အဆင့်မှာတစ်အချို့စီမံကိန်းကိုစတင်?
ကွန်ယက်အတွက်စီမံကိန်းများကိုဖေါ်ပြသည်ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုအကြောင်းကိုသူတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပြောပြရန်လူကို enable ။ ကျနော်တို့ကသူတို့အကြံပြုချက်များကိုနားထောင်ကြပြီးကောင်းသောစိတ်ကူးများရှိပါကကျနော်တို့ကသူတို့ကိုလက်ခံပါ။ မကြာသေးမီနှစ်ထဲမှာ, Burgas မြူနီစီပယ်မြို့ခြုံငုံအသွင်အပြင်ကိုပြောင်းလဲများစွာကိုစီမံကိန်းများကိုအကောင်အထည်ဖော်။ Burgas လမ်းအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပိုအဆင်ပြေဖြစ်လာပြီးယခုပိုပြီးပွင့်လင်းပင်လယ်ကိုရန်ဖြစ်ပါသည်။
ငါတို့ရှိသမျှသည်ကျောင်းများနှင့်မူလတန်းကျောင်းများတွင်စွမ်းအင်ထိရောက်မှုအတိုင်းအတာအကောင်အထည်ဖော်။ အစားအစာကျန်းမာလမ်းရှိချက်ပြုတ်ထားပြီး, ကြှနျုပျတို့5နှစ်အရွယ်ကလေးများအတွက်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားပညာရေးမိတ်ဆက်ပါပြီ။ သစ်တစ်ခုစီမံကိန်းတစ်ခုဖွံ့ဖြိုးဆဲတဲ့အခါမှာကျနော်တို့ကကိုယ်နှိုက်များအတွက်အထီးကျန်မဟုတ်ကြောင်းရှာကြာလော့။ အဆိုပါအရေးကြီးသောအရာသည်အခြားစီမံကိန်းများကိုပိုမိုဘုံမြေပြင်ရှိသည်နှင့်ရှိသမျှသောစီမံကိန်းများကိုတစ်ဦးချင်းစီကတခြားဖြည့်စွတ်ကြောင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုတွေတစ်ခုမှာစီမံကိန်းများကိုရေရှည်ရှုထောင့်များတွင်ထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပွငျ, ငါတို့စွမ်းအင်နဲ့ save ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတဖြစ်ကြောင်းဆန်းသစ်နည်းပညာများ၏အသုံးပြုမှုကိုစည်းကြပ်ရန်ရှာကြာလော့။
© dnikolov.eu / မူကြမ်း - အားကစားခန်းမ Arena Burgas
© dnikolov.eu / မူကြမ်း - ရေနံဓာတု၏ယဉ်ကျေးမှုအိမ်
ယှဉ်ပြိုင်၏တတိယစာစောင် "တစ်နှစ်တာ၏မြို့တော်ဝန်" ဘူဂေးရီးယားမြူနီစီပယ် Kmeta.bg ၏ Portal ကိုကစီစဉ်နှင့်သတင်းအချက်အလက်အေဂျင်စီအာရုံစိုက်ခုနှစ်တွင်, သင်ဆု "ဥရောပမြို့တော်ဝန်" အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ဒီအကဲဖြတ်သငျသညျအဘယျသို့ဆိုလိုသနညျး နိုင်ငံသားများအလုပ်၏သဘောသဘာဝနှင့်မြို့တော်ဝန်၏လုပ်ငန်းတာဝန်များအားတွေနဲ့အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ပါသလား
ငါ့အဘို့ဒီဆုချီးမြှင့် Burgas ၏မြို့အဘို့အရေးကြီးသောစီမံကိန်းများအကောင်အထည်ဖော်ရေးတို့အတွက်အီးယူရံပုံငွေများစုပ်ယူမှုအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့သောတစ်ခုလုံးကိုအဖွဲ့၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအတွက်အသိအမှတ်ပြုကဲ့သို့ဖြစ်၏။ တစ်မြို့တော်ဝန်၏အလုပ်၏သဘောသဘာဝအတိုင်း, လူတွေရဲ့သဘောထားအမြင်ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ တချို့ကအခြားသူများကိုသူတို့နှင့်အတူဒါအကျွမ်းတဝင်မဟုတ်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ကြ၏။ သို့သော်အရေးကြီးသောမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်မြို့တော်ဝန်၏အင်အားကြီးအဆမဲ့မရှိကြပေ။ မြို့တော်ဝန်လိုအပ်သောအစီအမံယူပြီးအမျိုးမျိုးသောအဖွဲ့အစည်းများ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်အတွင်းကျရောက်အဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီကပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အနေအထားမဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်ဤအမှုဖြေရှင်းရန်နှင့်သက်ဆိုင်ရာအဆောက်အဦမှအပြင်းအထန်တောင်းဆိုဖို့နည်းလမ်းရှာရန်မြို့တော်ဝန်ကိုရပ်တန့်မပေးသင့်ပါတယ်။ မြို့တော်ဝန်သူ၏အပေါင်းအဘော်ကနိုင်ငံသားများ၏နာမ၌မည်သည့်အချိန်တွင်မတက်တက်ကြွကြွအလုပ်လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှပွင့်လင်းဖြစ်ရန်ကြိုးစားကြသည်။ ဤသို့ပြုတစ်ခုမှာလမ်းကျနော်တို့အကောင်အထည်ဖော်ချင်သောအတွေးအခေါ်များမှလူသိရှင်ကြားပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ငါတို့သည်လည်းငါတို့သည်ငါတို့၏သူချင်းနိုင်ငံသားများ၏အကြံပြုချက်များအာရုံစိုက်ခြင်းနှင့်အတူတူကျနော်တို့ Burgas ၏မြို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်ရှာအံ့သောငှါ, လူမှုရေးကွန်ရက်များရှိလူများနှင့်အတူတက်ကြွစွာဆက်သွယ်ရေးထိန်းသိမ်းရန်။
Burgas နှင့် Burgas မြို့နယ်မှဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုအရေအတွက်ကို 4.5 အများဆုံးအချက်များထဲက5နှင့်အတူခရီးသွားဧည့်သဖြင့် TripAdvisor အတွက်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ သင်နှစ်နှင့်ရာမှနိုင်ငံများကျော်ခရီးသွားဧည့်များ၏အရေအတွက်တိုးသတိထားမိသလား?
ငါဒါဆိုတဲ့အချက်ကိုအားဖြင့်ပီတိအံ့သြသွားတယ် Burgas မြူနီစီပယ်အများအပြားဆိုဒ်များ TripAdvisor အတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြသည်။ဤသည်အားလပ်ရက်, ခရီးစဉ်နှင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများအတွက်အများဆုံးသွားရောက်လည်ပတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်များတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါသည်ငါ့မိသားစုနှင့်အတူသွားလာသည့်အခါကျွန်မမကြာခဏဆိုက် TripAdvisor ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်, ငါသွားရောက်လည်ပတ်ဖို့စီစဉ်ထားဟိုတယ်နှင့်အရပ်တို့ကို ပတ်သက်. ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များနှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုဖတ်ပါ။
ထုတ်ပေးပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာနှင့် Burgas လေဆိပ်များစင်းလုံးငှားအစီအစဉ်အတွက်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်သတင်းအချက်အလက်များကို ကိုးကား. ငါစိတ်ချလက်ချအရှိဆုံးလေးနက်ရုရှားထံမှခရီးသွားဧည့်များ၏တိုးတက်မှုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုပြောနိုင်ပါသည်။ သူတို့ပြီးသားဒေသတွင်းပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုပိုင်ဆိုင်အဖြစ်သူတို့ထဲကတစ်ဦးကကြီးမားသောရာခိုင်နှုန်း, ရေတိုရေရှည်အားလပ်ရက်များအတွက်သို့သော်ကြာကြာကာလအဘို့မဟုတ်လာ။
အပြင်ရုရှားခရီးသွားဧည့်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်အတွင်းအားလပ်ရက်ဖြုန်းအတွက်ပိုမိုစိတ်ဝင်စားမှုပိုလန်, ချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ဟန်ဂေရီနှင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံမှခရီးသွားဧည့်သဖြင့်သရုပ်ပြနေသည်။ သူတို့ထဲကအများစုဟာသူတို့ရဲ့မိသားစုများနှင့်အတူ လာ. ခရီးသွားအမျိုးမျိုးအခြားရွေးချယ်စရာပုံစံများ၏ပရိသတ်များဖြစ်ကြသည် - ဤကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကိုပြသရာဖြစ်တယ်။ အဆိုပါကိန်းဂဏန်းများခြွင်းချက်မရှိများမှာ - မေလ 2015 ၏အဆုံးမှာခရီးသွားဧည့်အခွန် 2016% တိုး 8 နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ တိုးတက်မှုနှုန်းခကျြအတှကျဂျာမဏီ + 24% အဘို့, အင်္ဂလန် + 22% အဘို့, စတိုးနီးယား + 30% အဘို့, ယူကရိန်း + 70% ရန်အဘို့အ + 28% ထိုကဲ့သို့သောရုရှားနိုင်ငံအဖြစ်နေရာများများအတွက်အစီရင်ခံနေသည်အဖြစ် Burgas လေဆိပ်ကနေလေယာဉ်ခရီးစဉ် 40% ပို သမ္မတနိုင်ငံ + 37% နှင့်ပိုလန် + 40% သည်။
ဘူလ်ဂေးရီးယားတစ်ဦးစျေးပေါခရီးသွားဧည့်ဦးတည်ရာအဖြစ်နိုင်ငံခြားမီဒီယာအတွက်လက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ညံ့ဖျင်းသောခရီးသွားဧည့်, အရက်ခရီးသွားလုပ်ငန်း, ပါတီများ - ဤမကြာခဏနိုင်ငံခြားစာနယ်ဇင်းများတွင်ဖတ်ရှုနိုငျသောသော့ချက်စာလုံးများဖြစ်ကြသည်။ အဘယ်အရာကိုအတိုင်းအတာဘူလ်ဂေးရီးယားကမ္ဘာကိုကြော်ငြာထားရမည်ဘယ်လိုယူသင့်သနည်း ဖြစ်နိုင်ဒီပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပါတယ်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးယူကြမည်နည်း
တာဝန်ရှိသူတဦးကစာရင်းများအရယခုနှစ်ကြောင့်တစ်ခုလုံးကိုပင်လယ်နက်ကမ်းခြေပေါ်တွင်ရာသီအတွက်ခရီးသွားဧည့်များ၏အရေအတွက် 10% တိုးတက်မှုနှုန်းခန့်မှန်းထားသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲပိုပြီးမကြာခဏအဓိကခရီးသွားဧည့်ဖလှယ်မှုအပေါ်ကခရီးသွားဧည့် profile ကိုအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတဲ့ကြောင်း commented ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ TripAdvisor သို့မဟုတ်အလားတူဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏အကျဉ်းပြန်လည်သုံးသပ်ယူလျှင်သင်, ကိုယ်ကိုကိုယ်ဖွငျ့ဤတွေ့နိုင်ပါသည်။ နိုင်ငံခြားရေးမီဒီယာကိုလည်းအရက်ခရီးသွားလုပ်ငန်းများအတွက်ဦးတည်ရာအဖြစ်ဘူဂေးရီးယားပင်လယ်နက်ကမ်းခြေ၏ "မြှင့်တင်ရေး" ကိုကြီးမားတဲ့အလှူငွေရှိသည်။ image ကိုပြောင်းခြင်းသိသိသာသာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု, အလုပ်ကြိုးစားမှုများနှင့်အောင်မြင်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလိုအပ်သည်။
တမြို့လုံးလှည့်ပတ်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်နှင့် Burgas ၌သင်တို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မထူးခြားတဲ့သောနေရာများရှိပါသည်။ သဘာဝဂေဟစနစ်, ornithological, ဘာသာရေး, spa, အပန်းဖြေခြင်းနှင့်သမိုင်းဆိုင်ရာခရီးသွားလုပ်ငန်းများအတွက်အခွင့်အလမ်းနှင့်အတူခရီးသွားဧည့်ဦးတည်ရာအဖြစ်ဒေသမြှင့်တင်လာသောအခါဤရွေ့ကားသောအရပ်တို့ကိုအာရုံစူးစိုက်ရပါမည်။
© dnikolov.eu - စိန့် Anastasia ၏ကျွန်း
Burgas တစ်ရာစုနှစ်များစွာကြာသမိုင်း, သဘာဝအထင်ကရအဆောက်အ, သိုက်, protected ဒေသများ, နှစ်ပတ်လည်ပွဲတော်များ, ပင်လယ်နှင့်လေဆိပ်နှင့်အတူတစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သမိုင်းဆိုင်ရာခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အဘို့မဆိုစီမံကိန်းများရှိပါသလား
ဤအသောနေရာများတစ်ခုမှာ, သင်သိနေသည် စိန့် Anastasia ကျွန်း။ ဒါဟာနှစ်ပေါင်းများစွာစုဆောင်းကြပြီသမိုင်းနှင့်ဒဏ္ဍာရီကြွယ်ဝတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆယ်စိန့် Anastasia ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ခရီးသွားဧည့်ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်လာခဲ့သည်တစ်ခုတည်းသောဘူဂေးရီးယားကျွန်းဖြစ်ပါတယ်။ အတိတ်ကာလနှစ်ခုနွေရာသီရာသီကျော်, က Burgas ၏မြို့တစ်ခုလောက၏ရာအရပျဖွစျလာခဲ့သ - အပန်းဖြေခြင်းနှင့်အားလပ်ရက်များအတွက်အကြိုက်ဆုံးဦးတည်ရာကို, ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်ရပ်များ, ပုဂ္ဂလိကနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဖြစ်ရပ်များကိုင်ထားသည်။ စိန့် Anastasia ကျွန်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက် "ဘူလ်ဂေးရီးယား၏အံ့ဖွယ်" တွင် 1 များအတွက်ခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုအမှတ် 2015 ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနှစ်မှာတော့ကျနော်တို့တစ်ချိန်တည်းပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် 20% ကြီးထွားသတင်းပို့ပါ။ ထို့အပြင်ထိုကဲ့သို့သောကော်ပိုရိတ်ပါတီများ, မင်္ဂလာဆောင်, နာမည်နှင့်အခြားဖြစ်ရပ်များအဖြစ်ကျွန်းပေါ်တွင်ဖြစ်ရပ်များ၏အဖှဲ့အစညျးအတှကျတောင်းဆိုမှုများရှိပါတယ်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ အဆိုပါစိတ်ဝင်စားဖွယ်အရာသည်ဤတောင်းဆိုမှုများကိုများစွာသောတိုင်းပြည်ပိုမိုဝေးလံသောမြို့ကြီးများအနေဖြင့်ရောက်လာသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
© aquae-calidae.com - ခရီးသွား Complex "aqua Calidae"
ကျနော်တို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆက်လက်ထားတဲ့အခြားယဉ်ကျေးမှုနှင့်သမိုင်းဆိုင်ရာ site ကို, ထိုဖြစ်ပါတယ် ခရီးသွားဧည့် Complex "aqua Calidae" - ရောမနှင့်ဘိုင်ဇင်တိုင်းဧကရာဇ်အနာကိုငြိမ်းစေခြင်းနှင့်ကူညီပေးခဲ့သည်ရာသည်၎င်း၏သည်အနာပျောက်စေသောဓာတ်သတ္တုရေ, အဘို့နှင့်အကြာတွင်ရာစုနှစ်များစွာအတွက်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာလူသိများတဲ့နေရာ Sultan Suleiman ၏ရေချိုးခန်းအံ့ဖှယျဤအရပ်ဌာနပေါ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
သုံးပတ်အကြာနှောင်းပိုင်းရှေးခေတ်နှင့်အလယ်ခေတ်မြို့ aqua Calidae အတွက်ဖြန့်ချိသစ်ကိုရှေးဟောင်းသုတေသနရာသီ - နီးပါး 20 ရာစုနှစ်များစွာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်သော Thermopolis ။ အသစ်တူးဖော်အကျင့်ကိုကျင့် Suleiman ၏ပွနျလညျထူထောငျရေချိုးအံ့ဖှယျ၏ဧရိယာအရှေ့ရာယူပါ။ လောလောဆယ်နီးပါး 70 နှောင်းပိုင်းတွင်ရှေးခေတ်နှင့်အလယ်ခေတ်ဒင်္ဂါးပြားရှိတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သူတို့ထဲကတချို့ကမက်ဆီဒိုးနီးယားနှင့်မဟာအလက်ဇန္ဒား၏ဖိလိပ္ပု II ၏အင်ပါယာအတွက်သည့်ဒင်္ခဲ့ကြသည်။ ကျန်ရှိနေသေးသောဒင်္ဂါးပြားရောမဧကရာဇ်များနှင့်ဘိုင်ဇင်တိုင်းဧကရာဇ်ပိုင်, ရောမအင်ပါယာနှင့်နှောင်းပိုင်းကဘိုင်ဇင်တိုင်းအင်ပါယာ၏အချိန်ကနေဒင်္ဂါးပြားများနှင့်အော်တိုမန် Sultan ရှိပါတယ်။ အဆိုပါအပိုငျးအများထဲတွင်အလယ်ခေတ်ဖန်လက်ကောက်တစ်ကျောက်မျက်နှင့်အတူသတ္တုလက်စွပ်တစ်ကြေးဝါစာအုပ်ချိတ်များနှင့်အခြားဗိသုကာအသေးစိတ်ကို၏အကျိုးအပဲ့ရှိပါတယ်။
ဤအပိုငျးတှငျအယဉ်ကျေးမှုအလွှာ၏လေ့လာမှု 2015 အတွက်စတင်ခဲ့သည်။ In-depth ကိုလေ့လာမှုပြီးနောက်နယ်မြေအဆိုပါခရီးသွား Complex ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုပြတိုက်ဧရိယာ၏ဖွဲ့စည်းခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုနှင့် တွဲဖက်. ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးများအတွက်ဖြန့်ချိလိမ့်မည် "aqua Calidae ။ "
အဆိုပါခရီးသွား Complex "aqua Calidae" ၌ငါတို့သည်လည်းခရီးစဉ်အော်ပရေတာနှင့်နိုင်ငံခြားခရီးသွားဧည့်အနေဖြင့်လာရောက်လည်ပတ်သူအဘို့အတောင်းဆိုမှုများများ၏အရေအတွက်တိုးစောငျ့ရှောကျ။
© dnikolov.eu - Burgas အတွက်သဲကိန်းဂဏန်းများ
© dnikolov.eu - အိမ်ပြင်ယောဂ
© dnikolov.eu - Flora 2016
© dnikolov.eu - နယူးရေကူးကန်
နှင့်အဆုံး၌, သင်ဘူလ်ဂေးရီးယားလူငယ်တဲ့ဘူလ်ဂေးရီးယားအဘယ်အရာကိုအကြံပေးမယ်လို့နှင့်သင်မည်သို့ပြည်ပမှာတဲ့ဘူလ်ဂေးရီးယား၏အတွေ့အကြုံမှအကျိုးမလဲ သင်ဘယ်လို Burgas ဖို့အတွက်ပြန်သွားဖို့သူတို့ကိုဆွဲဆောင်မလဲ
မကြာသေးမီနှစ်များတွင် Burgas သည် dynamically ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့သည်အခြေခံအဆောက်အအုံတိုးတက်လာသည့်မူလတန်းကျောင်းများနှင့်စာသင်ကျောင်းများပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံကြပါပြီ, ငါတို့သစ်တွေအသစ်ကလေးများကစားကွင်းနှင့်အားကစားခိုင်ခိုင်လုံလုံ, အလူနေအိမ်ရှုပ်ထွေးသောအတွက်ပန်းခြံများနှင့်နေရာများကိုတည်ဆောက်လေပြီ။ ဒီမှာနှင့်ပြည်ပမှာနေသောသူတို့အဘို့နေသောသူတို့အဘို့, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငယ်ရွယ်သူချင်းနိုင်ငံသားများ, ရှိသမျှသူတို့ကိုအကြောင်းကိုပါပဲ။ Burgas သူတို့ပြည်ပမှာဝယ်ယူခဲ့ကြပြီးလုသောငါတို့မြို့ကိုအသုံးဝင်သောနိုင်ပါတယ်, ၎င်းတို့၏အတွေ့အကြုံနှင့်အသိပညာသူတို့ကိုလိုအပ်ပါတယ်။
တမြို့လုံး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဘို့အကြှနျုပျ၏စိတ်ကူးများထဲကအတော်များများလေ့လာပြီးပြည်ပမှာနေထိုင်ကြထိုကဲ့သို့သောကျွန်တော်တို့ရဲ့သူချင်းနိုင်ငံသားများအနေဖြင့်တိကျစွာစေလွှတ်ခဲ့သည်။ သူတို့ပြန်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါ, Bourgas နောက်တဖန်ကဒီမှာဖြစ်နှင့်သောသူတို့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေပါလိမ့်မယ်။
Dimitar Nikolov အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ:
Facebook အမှာ Dimitar Nikolov
Dimitar Nikolov ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်
ဘူလ်ဂေးရီးယား, Burgas, ယဉျကြေးမှု, လူ | | rating:5/ 30